जब सलमानले सिद्धार्थको मृत्युलाई मजाक बनाए…? (भिडियो हेर्नुस्) – Hamro Nepali Samachar
Home/ मनोरंजन/जब सलमानले सिद्धार्थको मृत्युलाई मजाक बनाए…? (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । कहिले काँही सामान्य मानेर गरिएको कुराले अप्ठेरो पार्न सक्छ । कसै ाई खुसी बनाउन गरिएको मजाक वास्तविक बनिदिँदा आलोचना सहनु पर्छ ।
अहिले बलिउड अभिनेता सलमान खानको त्यस्तै आलोचना भइरहेको छ । उनले भर्खरै दिवंगत भएका बलिउड अभिनेता शिद्धार्थ शुक्लासंग मृत्युको विषयमा मजाक गरेका थिए । उनको त्यो पुरानो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै सलमानको आलोचना भएको छ ।
बिहीबार हृदयघातका कारण सिद्धार्थको मृत्यु भएको छ । अप्रत्याशित रुपमा भएको उनको निधनले परिवार त शोकमा छ नै बलिउड क्षेत्रनै शोकमा डुबेको छ । उनको शुक्रबार मुम्बईको ओशिवारास्थित श्मशान घाटमा ब्रह्मकुमारी रीति रिवाजकासाथ अन्तिम स.स्कार गरिएको छ ।